Nezve kushandiswa kwezvivakwa | Ota Ward Cultural Promotion Association
Nezve kushandiswa kwenzvimbo dzetsika nekuda kwezviyero zvekudzivirira muTokyo
Mamiriro ezvinhu echimbichimbi ehutachiona hutsva hwecoronavirus achasimudzwa nemusi weChina, Gunyana XNUMX, gore rechitatu reReiwa, asi panguva ino, kugona kushandisa nzvimbo iyi kuchawedzerwa kudzivirira kuwedzerwazve kwechirwere chekoronavirus. Izvi zvinotevera kurambidzwa zvichaiswa panguva yekushandisa.
Tinoda kubvunza vese vashandisi kuti varambe vachinzwisisa pamwe nekubatana mukudzivirira kupararira kwehutachiona hutsva hwecoronavirus.
XNUMX. XNUMX.Target nzvimbo, nguva, nezvimwe.　* 9/30 kugadzirisa
Gumiguru XNUMX (Chishanu), XNUMXrd gore reReiwa-Svondo, Gumiguru XNUMX, XNUMXrd gore reReiwa
Kana iwe ukaishandisa iyo chiitiko (varaidzo, nezvimwewo), zvichave kusvika Gumiguru XNUMX (Mugovera).
Uye zvakare, isu tinokuzivisa iwe nezve tsamba mushure me Gumiguru XNUMX (Muvhuro) naGumiguru XNUMX (Svondo).
Zvivakwa zvinopfupisa maawa ekuvhura
Nzvimbo iyi ichavharwa naXNUMX: XNUMX. Ndapota siyai nzvimbo iyi naXNUMX: XNUMX.
Tafura iri pazasi inoratidza nguva yekushandisa kune yega nzvimbo / kamuri.
Yekupedzisira yekushandisa nguva
Horo hombe, horo diki, nzvimbo yekuratidzira, yekudzidzira, imba yemumhanzi, imba yemusangano, imba yechiJapan, tii kamuri, kamuri yeunyanzvi, jimunasiyamu Kusvikira 21:00 (siya na21: 00)
Tafura tenesi Kupatsanura kusvika 20:00
Auto tenesi Kupatsanura kusvika 20:30
Kamuri yekudzidzira Kusvikira 20:45 (siya na21: 00)
Horo hombe, horo diki, nzvimbo yekuratidzira, studio Kusvikira 21:00 (siya na21: 00)
Horo, nzvimbo dzakasiyana-siyana, kona yekuratidzira, nzvimbo yakavhurika, studio yemimhanzi, yekutanga studio yemitambo, musangano wekusika (kamuri yekubikira, kamuri rehunyanzvi, kamuri rezvigadzirwa), imba yekuJapan -style, kamuri yemusangano, imba yekumirira Kusvikira 21:00 (siya na21: 00)
XNUMXnd Sports Studio (squash Dare) Kupatsanura kusvika 20:00
Ruzivo ruzivo Kusvika 19:00
Kudzoreredzwa kwenzvimbo yekubhadhara
Munguva iyi, zvisinei neboka rekushandisa, kana ukabvisa nzvimbo yekushandisa kudzivirira kupararira kwezvirwere zvinotapukira, tinodzosera huwandu hwakazara.Ndokumbira kuti ubate nzvimbo yega yega kuti uwane ruzivo.
Ndokumbira kuti ubate nzvimbo yega yega yemubhadharo wekushandisa nzvimbo nekuda kwekufupiswa kwenguva yekushandisa nguva yehusiku.
XNUMX. XNUMX.Kuganhurika pane huwandu hwevashandisi
Munguva ye emergency, huwandu hwevanhu mukamuri yega yega hwaive "mukati meXNUMX% yesimba".Nekudzimwa kwenzvimbo yechimbichimbi musi waGunyana XNUMX, XNUMX (China), mushure mekudzivirira hutachiona matanho zvichienderana nechikumbiro chehurumende yenyika neTokyo. XNUMX% kana zvishoma chete kune dombo, pop konzati, hunhu hunoratidza, mubereki-mwana musangano musangano, nezvimwe.
XNUMX. XNUMX.Matanho ekudzivirira hutachiona
Tinokumbira vese varongi uye vashanyi vane chekuita nezvivakwa nemitambo kuti vashande pamwe neanotevera matanho ekudzivirira hutachiona.
Semutemo wakazara, pfeka chifukidzo nguva dzose.
Nyatsogeza mushonga uye geza maoko ako.
Edza kudzvinyirira hurukuro (usasheedzera) uye yekukosora hunhu.
Ita shuwa kuti daro pakati pavo rakakodzera.
Tichaedza kufefetedza mweya.
Mukutaura, kudya uye kunwa zvinorambidzwa.
Isu tinoshandisa zvine simba kunyorera yekusimbisa kunyorera (COCOA) yeHurumende yeHutano, Vashandi neHurumende.
Isu tinomanikidza kuyerwa kwetembiricha uye tinotora matanho sekumirira kumba kana uine fever yakakura (*) zvichienzaniswa neyakajairika fivha kana kana iwe uine chero anotevera ezviratidzo.
Kana paine zvirambidzo zvekupinda munyika, nhoroondo yekushanyira nyika / matunhu anoda nguva yekucherechedza mushure mekupinda, uye kusangana padyo nemugari mukati memavhiki maviri apfuura, nezvimwe.
* Muenzaniso wechiyero che "kana paine kupisa kwakanyanya kupfuura kupisa kwese" …… Kana paine kupisa kwe37.5 ° C kana kupfuura kana XNUMX ° C kana kukwirira kupfuura kupisa kwese
XNUMX.Kurambidzwa uye zvikumbiro zvinoenderana nechinangwa chekushandisa
Panyaya yezvinangwa zvinotevera zvekushandisa, iko kushandiswa kuchadzimwa kana kukanzurwa kwechinguva chiripo.
Uye zvakare, isu tinoronga kusarudza kusimudza chinorambidzwa zvichibva nemamiriro ezvinhu mune ramangwana senge kufambira mberi kwemugwagwa.
A) Kudya nekunwa / mabiko
Mukutaura, kudya nekunwa mukati mechivakwa kunorambidzwa.Nekudaro, hydration yekudzivirira kupisa sitiroko harisi dambudziko.
Iko kushandiswa kwe "mabiko" mukamuri kuchamiswa kwechinguva chiripo nekuti zvinofungidzirwa kunge zvakaoma kumabhizinesi anopa chikafu nekumwa kunyatso kushandisa matanho ekudzivirira hutachiona.
Zvakanaka kudya masikati (kusanganisira kicheni cheOta Bunkanomori, kusanganisa kamuri rinorambidzwa kudya nekunwa), asi ndokumbirawo muchenjere nezve anotevera mapoinzi.
Ndokumbirawo mugare zvisina-kumeso-nenzira.
Ndokumbirawo uchengetedze chinhambwe chakakodzera pakati pevashandisi.
Ndokumbirawo udzivise kugovana zvidimbu uye mahwendefa pakati pevashandisi.
Ndokumbirawo urege kurukurirano ine ruzha panguva yekudya.
B) Shandisa izvo zvinoda kutarisisa
Paunenge uchishandisa izvi zvinotevera zvinangwa, ndapota nyatsoteerera kuchengetedza pakati pevanhu.
Mimhanzi tsika (mimhanzi inoridza)
Mimhanzi tsika (mumhanzi wezwi)
Shigin / rwiyo rwevanhu
Mimwe mitambo (hula dance)
Mutambo wemitambo (aerobic, jazz kutamba, nezvimwewo)
Ndokumbirawo usiye kumeso-ne-kumeso uye pfupi-kure kure hurukuro sezvazvinogona.
Disinfecti minwe yako pamutambo wega wega.
Nguva dzose disinfect maturusi (zvidimbu, enda mabwe, mabhodhi, mahjong mataira, matanda, nezvimwewo).
Mimhanzi tsika-yoga nezvimwe.
Kana kurovedza muviri kuchikonzera kufema, chengetedza yakatowanda nzvimbo.
Ndokumbirawo muchenjerere kuti musanyanye kusangana pakati pevashandisi
Dzivisa kumeso-kumeso kutaura uye kuimba.
Ticharega kushandisa karaoke kwenguva yekudzivirira hutachiona neiyo nyowani coronavirus.
Ndokumbirawo usashandise kana iwe uri mune yakashata mamiriro epanyama senge fivha kana chikosoro.
Ndokumbirawo urambe uchigona mukamuri
(Muchiitiko chechiitiko chine ruzha (konzati yedombo, nezvimwewo), muganho wepamusoro ndeye XNUMX% yesimba.)
Ndokumbirawo uchengete chinhanho chakakodzera pakati pevashandisi.
Ndokumbirawo mutibatsire kugeza maoko kana muchipinda nekubuda, uye nekunyatso shandisa tsika yekukosora.
Ndapota pfeka chifukidzo.Ndokumbirawo urege kupinda mumuseum kana usati wapfeka (ndapota bvunza vashandi)
Kudya uye kunwa mukati meimba kunorambidzwa musimboti (kusasanganisa hydration kudzivirira kupisa sitiroko)
Femesa mweya nguva dzose uchishandisa nzvimbo yacho (ingangoita maminetsi gumi paawa)
Ndokumbirawo urege kuishandisa kwenguva yakareba munzvimbo yakagovaniswa (yekugamuchira etc.)
Ndapota enda nemarara ako kumba
Kana iwe ukagadzira hutachiona hutsva hwecoronavirus mukati memasvondo maviri mushure mekushandisa, ndokumbira utaure izvi kumaneja wenzvimbo yauri kushandisa ipapo ipapo.
Kuti uwane ruzivo, ndapota ona gwaro rega rega.
Zvikumbiro kune vashandisi vezvivakwa
Kumbira kune varongi
XNUMX.Nezve kuvhurwa kweyekuyeuchidza imba　* 7/9 kugadzirisa
Imba yega yega yechirangaridzo yakavhurwa musi waXNUMX Chikumi (Chipiri) uye icharamba ichivhurwa senguva dzose.
Panguva yekuvhura, isu tinotora matanho anodiwa kubva pakuona kwekudzivirira kupararira kwehutachiona hutsva hwecoronavirus, zvichibva pane zvakanangana.
Tinokumbira ruregerero kune chero kunetsekana kwakakonzerwa uye tinotenda kunzwisisa nekushandira pamwe.
Ryuko Chirangaridzo Horo, Kumagai Tsuneko Chirangaridzo Horo, Sanno Kusado Chirangaridzo Horo
XNUMX.Nezve iyo mubatanidzwa wakatsigira bhizinesi　* 7/9 kugadzirisa
Mukuita chirongwa ichi, isu takatora matanho anodiwa kubva pakuona kwekudzivirira kupararira kwehutachiona hutsva hwecoronavirus.Kuti uwane ruzivo, ndapota ona peji rega rega rekuita ruzivo.
Tinokumbira ruregerero nekusagadzikana uye tinokutendai nekunzwisisa pamwe nekubatana.